Modely Krismasy dimy kalitao | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Templates, Cartoon vector
La Efa akaiky ny krismasy ary efa manangana ny hazo krismasy isika, manomana ny fanomezana ary mamolavola ny lisitry ny fiantsenana ka amin'ny alin'ny Krismasy dia tsy misy zavatra tsy hita eo ambony latabatra. Andro iray tena miavaka izay ezahantsika hanangonana ny fianakaviana manontolo ary hifalifaly.
Avy eo anilanay dia mametraka voam-pasika kely izahay ary ity dia modely karatra fialantsasatra dimy tena tsara afaka tanteraka. Miaraka amin'izy ireo ianao dia afaka miarahaba ireo olon-tianao amin'ny Krismasy ary koa ireo mpiara-miasa aminao.
1 Baolina Krismasy Volafotsy
2 Ny Reindeer Noely
3 Felam-panala amin'ny Noely
5 Ny hazo krismasy Retro
Baolina Krismasy Volafotsy
Avy amin'ny Vecteezy isika dia manana modely baolina volafotsy krismasy mikasika be dia be sy kalitao. Karatra Krismasy tena tsara tarehy no ho azon'ny namanao na ny mpifandray aminao rehefa manaingo azy avy amin'ny Photoshop ianao.
Ny Reindeer Noely
Ny serfa dia iray amin'ireo biby tandindona indrindra ny fialantsasatry ny Noely. Ity karatra ity dia mametraka azy amin'ny toerana tena miavaka mba hahafahanao misintona azy hampiasainao manokana. Samy manana azy io ianao amin'ny Ai, EPS, PDF ary JPG hahafahanao manamboatra ny fanovana mifanaraka amin'izany.
Felam-panala amin'ny Noely
Avy any Vecteezy indray izahay manana modely tonga lafatra hafa handravahana karatra krismasy. Azonao ilay izy misy amin'ny endrika vector, mba hahafahanao manao izay tianao fotsiny amin'ity modely ity.
Santa's sleigh dia karatra misy kalitao hafa feo manga izay hahazo tsiky an'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana na namana iray izay mandray azy amin'izao andro manokana izao. Vary hafa kalitao hafa ho an'ny Krismasy toy ny ireo ato amin'ity lahatsoratra ity.
Ny hazo krismasy Retro
Ho an'ireo izay tia Retro ity Hazo krismasy misy endrika miolaka tsara ary manalavitra izany rehetra izany etsy ambony. Miaraka amina feo milamina sy miaraka amin'ireo felam-panala izay sfera fotsy tsotra, karatra krismasy manokana sy hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Cartoon vector » Modely karatra krismasy dimy maimaim-poana
Ny rohy dia mitondra anao mankany amin'ny pejy fisintomana!
Ny fanitsiana mandeha ho azy an'ny Adobe Lightroom izao dia mampiasa Art intelligence
Pantone dia manambara ny loko 2018 amin'ny taona: ultraviolet